BBC Macallin u dhashay Kenya oo abaalmarin caalami ah ku guuleystay | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Macallin u dhashay Kenya oo abaalmarin caalami ah ku guuleystay
BBC Macallin u dhashay Kenya oo abaalmarin caalami ah ku guuleystay
Macallin dhiga maaddooyinka Saayniska oo ka soo jeeda dhulka miyiga ee dalka Kenya oo mushaarka uu qaato intiisa badan muddo ku soo caawinayey dadka saboolka ah ayaa ku guuleystay abaalmarin lacageed oo dhan 1 milyan oo doolar (£760,000 oo gini) oo la guddoonsiiyo sanad walba macallinka ugu mudan caalamka.
Macallin Peter Tabichi oo aaminsan madhabta kirishtanka ee katooligga wuxuu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee macallimiinta 2019-ka.
Peter waxaa si weyn looga ammaanay isla markaana guusha uu gaaray qayb weyn ku leh fasallo ay ardaydu buux dhaafiyeen iyo buugaagta manhajka oo aan jirin sida uu waxbaridda ardayda ugu soo dulqaatay uguna guuleystay.
Wuxuuna aad u jecel yahay maaddooyinka uu dhiga ee saayniska iney dadku aqoon dheeraad ah u yeeshaan si ay mustaqbalkooda u dhisaan isaga oo aaminsan “Saaynisku inuu yahay waddada loo maro
Abaalmarinta waxaa lagu iclaamiyey munaasabad lagu qabtay Dubai, waxaana Peter loo aqoonsaday inuu yahay macallin “ka go’naasho leh” oo u taagan inuu wax ka beddelo noolasha dadka saboolka ah ee ku nool deegaanka Rift Val ley e e dalka Kenya.
Abaalmarinta lacageed ee la guddoonsiiyeyna 80% wuxuu ku deeqay in wax looga qabto dadka saboolka ah gaar ahaanna dugsiga sare ee Keriko oo ku yaalla tuulada Pwani gobolka Nakuru, lacagtaasina lagu iibiyo dharka ay ardaydu dugsiyada u xidhaan (uniform) iyo buugaagta manaahjita.
Macallinkan 36 jirka ah hammigiisu wuxuu yahay inuu maaddooyinka saayniska gaar ahaanna xisaabta iyo fiisiksi uu bulshada ku dhiirrageliyo isga oo hammigiisa ku koobneen Kenya balse gaarsiisan ilaa heer qaradeed.
Guusha macallin Peter ayaa lagu sheegay iney tahay mid ididiilo wanaagsan ku abuureyso jiilka waxbartay ee dhalinyarada ah ee ku nool dalka Kenya iyo qaaradda Afrika intaba.
Previous articleIdaacadii BBc da Lanteedii afka Soomaaliga oo Fashil qarka u saaran, saaka iyo Wixii dhacay
Next articleXildhibaan C/qaadir Jirde oo si adag u naqdiyey Khudbadii Muuse Biixi ka hor akhriyey Golayaasha Qaranka